Afar arrimood oo ku saabsan socdaalkii Trump ee Sucuudiga - BBC News Somali
Isaga oo Donalad Trump soo afjarey booqashadiisii Sucuudiga ee socdaalkiisii u horreeyey ee uu u baxo dibbada, aynu dib u milicsano waxyaabihii hareeyay safarkiisa.
1. Far taag taaga Trump
Suulka oo uu godo korna u qaado waa calaamadaha uu madaxweynuhu caanka ku yahay, saxafi ayaa madaxweynaha sawir kaga qaadey isaga oo siddaasi ku sameynaya magaalada Riyad.
Kadibna, waxa la isweydiiyey qaabkani ma tahay wax laga caroon karo? Haa, haddii aad akhrido qoraalka ay safaarada Mareykanka ee Riyadh u qaybisey saxafiyiinta ka waramayey socdaalka Donald Trump sida ay sheegtey Annie Karni oo kamid ah weriyayaashaasi.
Laakiin miyey tahay? ''Maya runtii''. Sidda ay sheegtey wariyaha BBC's Kim Ghattas. "Waxaan ahay qof Carab ah, waxaan ku noolahay dunida carabta, waan ukala socdaaley wadamada Carabta, waligayna maan maqal ".
Socdaalkii Trump ee Sucuudiga:
Faysal bin Farxaan, oo la taliye u ah Wasaarada Arrimaha Dibada ee Sucuudiga, isaguna ma uu ka arag dabeecad suul-taagga Trump wax laga biyo diido, siddaas ayuu ku qorey bartiisa Twitterka.
Image caption Soo dhoweyntii Donald Trump
Xagee ayaa laga keeney? Waxay u muuqataa, in ay waagii hore u muuqan jirtey khalad. Halka hoose waxa ku qoran arrin uu ka qorey Waaxda Difaaca Luqadaha sannadkii 2003da, " kadib dagaalkii Gacanka ee 1991kii, Sikastaba ha ahaatee Carabta ku nool Bariga Dhexe wey la qabsadeen sidda uu gacmaha u taag taago, sidda calaamada loo isticmaalo okay oo tilmaanta in laga wada shaqeeyo xoriyad ."
Waana tan cadeynta ah in aan laga xanaaqin calaamadan, waakan mid ka mid ah shaqaalaha Boqorka Sucuudiga oo madaarka Riyadh u tilmaamaya in boqorka Salman bin Abdul Aziz al-Saud uu diyaar u yahay in uu soo dhoweeyo madaxweyne Donald Trump.
2. Oraahdii Trump ee "Argagixisada Islaamka"
Khudabadii sidda weyn loo sugayey kumey jirin oraahda "argagixisada xagjirka ah ee Islaamka", oo uu hore u isticmaalay, Muslimiintuna ay aad uga carootay.
Balse khudbadaasi markii lagu d aabacay boggiisa Facebook-ga waxaa ku jirey oraahda ah "Muslimiinta Argagixisada ah" iyo "Kooxaha argagixisada muslimiinta ah".
Khudbadiisa waxa uu ku sheegey: "Isaga oo si daacad ah uu uga hortagayey dhibaatooyinka mayal adkaanta iyo argagixisada Islaamka nooc kasta oo uu yahay
Marka waxaa la is weydiinayaa ma kalmadihii ayuu ku mergadey mise waxa uu go'aansadey in uu bedelo khudbada?
Sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa mar danbe sheegey in uu Mr Trump daalanaa.
Kalmada "Islaamiyiinta" waxay ka hadleysaa dadka doonaya in ay dib u habeeyaan dowlada iyo bulshada si loogu xukumo sharciga Islaamka ama shareecada.
Dhinaca kale "Islaam" waxa loo isticmaalaa diinta.
Sidaas darteed ayay dad badan oo ku takhasusey arrimaha Bariga Dhexe ay door bidaan in ay isticmaalaan oraahda "Muslimiinta mayalka adag" si aanay meel uga dhicin diinta oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, in uu Mr Trump ka leexdey khudbadii wax dhibaato ah mey keenin.
Image caption Booqashadii Donald Trump
3. Masar ma ay xiran Melania
Ajnabiga booqanaya boqortooyada laguma khasbo in ay xirtaan masar, dumarka reer Galbeedka ee aan xiran masar iyaga oo jooga Sucuudigana wax ka mid ahaa Raysal Wasaaraha Britain Theresa May, Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel, Xaaskii madaxweynihii hore ee Mareykana Michelle Obama iyo xoghayihii hore ee Mareykanka Condoleezza Rice.
Madaxweyne Trump ayaa 2015 ku dhaliilay xaaska madaxweyne Obama inaysan xiran masar mar ay booqasho ku joogtay Sacuudiga.
Image caption Trump xaaskiisa iyo gabadhiisa toona ma xiran masar
Gabadha uu dhalay madaxweyne Trump Ivanka, iyaduna may xiran masar ama garbasaar. Markii la weydiiyey sababta ay u xidhan waayeen masarka, Muuqbaahiyaha CNN ayaa sheegey in Aqalka Cad loo sheegay in aan looga baahneyn in ay xirtaan masaro.
Waxa kale oo la sheegey inay labada dumar ahiba ay xidhnaayeen toobab gacmo oo asturan.
4. Trump miyuu foorarsadey?
Sheekadani waxay buuq badan kenetay sannadkii 2009kii mar ay London ku kulmeen madaxeyne Obama iyo Boqorr cabdallaha Sacuudiga, kulankaas oo buuq dhaliyey.
Image caption Barack Obama waxa uu u foorarsadey Boqor Cabdulla Binu cabdiCasiis Al Sacuud sannadkii 2009
Mr Trump ma uu gefin inuu ka hadlo muuqaalkaas oo uu ku qoro bartiisa Twitterka, balse su'aashu waxay tahay hadda isaga siduu u dhamqay.
Image caption Donald Trump oo loo xidhayo silsilad
Muuqaalkan kora ma wuxuu muujinayaa foorarsi Mise waxa ay ahayd uun in uu foorarsado si uu boqorku ugu geliyo silsilada maadaama oo uu madaxweyne Trump aad uga dheer yahay boqorka Sucuudiga?
Wali Aqalka Cad kama uu hadal arrinkan.